Maitiro ekubvisa watermark kubva pamufananidzo nemapurogiramu aya | Gadget nhau
Paco L Gutierrez | 28/01/2021 11:36 | Yakagadziridzwa ku 28/01/2021 12:37 | General
Iyo Internet izere nemifananidzo, ingoenda kuGoogle kunotsvaga mifananidzo yechinhu chero chatinotsvaga, zvese zvemahara. Asi zvimwe zvezvinhu zvatinoona pa internet zvine muridzi, mune zvifananidzo Zviri nyore kuziva kana muridzi achizviona seyake, nekuti iwo mufananidzo unowanzo uine mucherechedzo. Aya mamaki anowanzo kuve diki logo mukona iyo iyo mupepeti wemufananidzo unojekesa uye hausi wekuvhiringidza, uchisiya zvirimo se protagonist.
Izvi hazviwanzo kuitika, dzimwe nguva tinogona kuwana ichi chiratidzo chakasvibiswa mukati memufananidzo, tichisara kumashure asi zvakajeka. Itsika yakajairika kana tikatarisa kuti chifananidzo ichi hachifanirwe kushandiswa neumwe munhu. Icho chinhu chinofanirwa kuremekedzwa sezvo zvichiratidza kuti munyori waro haanganyanye kufara kuona mufananidzo wakaburitswa nemumwe. Dzimwe nguva ndiwo mapurogiramu ekugadzirisa ivo pachavo kana kunyangwe iko kamera yekushandisa yeimwe nhare dzinosiya watermark yavo, tinogona kuibvisa zviri nyore nemamwe mapurogiramu kana kunyangwe newebhu webhu. Muchikamu chino tichaenda kuratidza mabvisiro watermark pane pikicha.
1 Zviri pamutemo kubvisa watermark kubva pamufananidzo?
2 Watermark inobvisa
3 Mufananidzo Stamp Remover
Zviri pamutemo kubvisa watermark kubva pamufananidzo?
Kana iyo foto iri yako chivakwa uye iwe uchingoda kubvisa watermark iyo chirongwa kana kamera application yaiswa pauri, zviri zvachose zviri pamutemo. Aya ma watermark anoitwa nevagadziri veaya maficha kuti neimwe nzira vanyurire kushambadzira pakavanda mune yega yega mifananidzo yedu, chimwe chinhu chisingazive uye chisina kunaka kuravira. Izvo zvakakosha kuti uzive kuti mazhinji ema watermark aya anogona kubviswa nekungo bvunza mukati megadziriro yeaya maapplication.
Kana, kune rumwe rutivi, chifananidzo chiri kubva paInternet uye watermark ichibva kune wepakati kana munhu, tinogona kubvisa watermark kana izvo zvatinoda kushandisa chifananidzo nenzira yega, asi kana izvo zvatinoda kuita nekuishandisa, dai taigona kuve nenyaya dzemutemo, kana munyori achida kudaro. Kubva kutora pikicha uye kugadzirisa kwayo kunotevera ibasa risingadiwe nemunhu wese kupa.
Pane imwe nguva yambiro nezve zvingangoitika zviri pamutemo mhedzisiro, isu tichaenda kuona kuti ndeapi mapurogiramu ekushandisa kana kuti ndeapi mawebhusaiti ekushandisa kubvisa iwo anotsamwisa uye asingatarisi watermark ayo, kunyangwe akangwara, achiparadza mufananidzo wakanaka.
Yakanaka chirongwa cheiri basa, pasina mubvunzo iri Watermark Remover. Iyo ine zvese zvishandiso zvinodiwa kudzima kana kukanganisa zvese zvigadzirwa zvatiri kuda kubva pamufananidzo, kubva pamashopu kusvika kukukanganisa kwatisingadi kuona. Izvo zvinoitwa nenzira yakapusa, saka hazvidi kuti uve neruzivo rwemberi nezvekugadzirisa mapikicha kana chirongwa.
Ichi chirongwa chemahara uye hachidi chero kuisirwa, isu tinongowana iyo webhu uye kutanga, heino mamwe maitirwo ekuti ungazviita sei:
Isu tinovhura mufananidzo kuburikidza nechirongwa mu "Mifananidzo watermark".
Isu tinotara iyo nharaunda mune iyo mhando kana chigadzirwa chatiri kuda kubvisa.
Isu tinowana uye tinya pane sarudzo "Chinja"
Kugadzirira, tichava nekubvisa watermark yedu.
Mufananidzo Stamp Remover
Chimwe chirongwa chakanakisa cheiri basa pasina mubvunzo Photo Stamp Remover, chirongwa chiri nyore kushandisa kunyangwe isu tisina hunyanzvi nekombuta. Chirongwa ichi chakanyatsogadzirirwa basa iri, saka maturusi atinowana ekubvisa watermark akasiyana kwazvo uye anoshanda. Kusiyana neshanduro yapfuura, iyi inofanira kuiswa pakombuta yedu, saka tichafanira kuitora kare. Tichaenda kududziro yekubvisa watermark mune mashoma matanho akapusa:
Isu tinovhura iko kunyorera uye tinya pa «Wedzera faira» kusarudza pikicha yatinoda kugadzirisa.
Kana chifananidzo changotakurwa, isu tinoenda kurudyi pani yekushandisa uye tinya pane sarudzo "Rectangular" muchikamu cheMathuluzi.
Iye zvino ndega isu tinofanirwa kusarudza nzvimbo inowanikwa watermark kuti isu tinoda kubvisa uye tambo inoshanduka ichagadzirwa yakatenderedza iyo tsvuku, zvinofanirwa kucherechedzwa kuti akasimba bhokisi iri riri pane mucherechedzo, zvirinani mhedzisiro yacho.
Dzvanya pane sarudzo "Kubvisa mamiriro" uye tinya pane sarudzo "Inpainting" yemenyu iyo yatinoona yakaratidzwa.
Iye zvino isu tinongofanirwa tinya pane sarudzo "Mutsa" uye watermark ichabviswa zvachose, kupedzisa iyo edition.
Pakupedzisira kuchengetedza mufananidzo, tinya pa «Sevha se», sarudzo yaive iri mumenyu huru yekushandisa.
Sezvo isu tichiona, kubvisa watermark kubva pamufananidzo kuri nyore kwazvo uye hakudi kuomesa mapurogiramu ekugadzirisa, Kana iwe uine chero mazano pane dzimwe nzira kuti uite iri basa, isu tichafara kuvagamuchira kuburikidza nemhinduro.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Gadget nhau » General » Maitiro ekubvisa watermark kubva pamufananidzo nemapurogiramu aya